> Resource > iPhone > Top 3 iPhone shawladda kaabta for Windows iyo Mac
Dad badan ayaa aaminsan qaban caadi ah in mar file la tirtiray off ay iPhone ama iPad, waxaa lagu weligeedba way tageen. Fikradda waxaa si kastaba ha ahaatee badiyay; waxaa run ma aha. Xogta aan laga badiyay ilaa iyo inta uu si buuxda ayaa loo overwritten ku wadid aad iPhone ee adag. Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo la abuuro hayaan on barnaamijka software Lugood si ay u hubiso in aanay lumin xogta ay. Abuuritaanka gurmad ah via Lugood ma aha wax adag, xitaa aad sameysan kartaa barnaamijka si ay u abuuraan gurmad ah mar kasta oo aad iPhone ku xiran Lugood. Si kastaba ha ahaatee, kuwaas oo files gurmad yihiin in ay abuureen Lugood ay ku kaydsan yihiin your computer, oo u baahan in la soo saaro si loo isticmaalin si sax ah. Waxaa jira barnaamijyo badan oo kala duwan oo loo isticmaali karo soo saaro hayaan iPhone, laakiin in la hubiyo in fiirsato si sax ah sameeyo waa muhiim quruxsan. Halkan waxa ku jira hogaanka 3 iPhone gurmad extractors for Windows iyo Mac:
Top 3: iPhone kaabta shawladda
Top 2: iBackup shawladda
Top 1: Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Top 3: iPhone shawladda kaabta
Operating System: Windows iyo Mac
The kaabta shawladda iPhone waa barnaamij aad u socon in la xiran karo si loogu isticmaalo oo dhan iDevices, laga bilaabo iPhone ugu horeysay oo iPad iyo jidka oo dhan socday ilaa 6s ka iPhone (Plus) iyo mini iPad. Gurmad kasta oo ka dhigay on your computer via Lugood waa awood lagu akhriyo iyada oo kaabta shawladda iPhone, iyo barnaamijka si fudud u soo celin kartaa xog ku saabsan qalab aad ee arrin dhowr daqiiqo.
- Shaqeeyaa on Linux, Mac iyo Windows
- Taageerada oo dhan iDevices
1. Interface Simple, iyo sidoo kale barnaamij loogu tala galay
2. Falanqeynta siiyaa xogta ee gurmad
1. Inta jeer, guuldareysto inuu soo saaro xogta oo buuxda
Shawladda iBackup waa awood soo saarida hayaan Lugood hab aad u sahlay. By kaliya Author iyo xulashada gurmad Lugood ah, waxa aad furan kartaa ilaa ka kooban yahay iyo aragti kasta oo aad dooneyso in aad kala soo bixi. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa hayaan cusub, iyo waxyaabaha ka soo kabsado tirtiray ka iDevice. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee shawladda iBackup ah:
- Maxkamad Free u oggolaanaysa in soo saarista 50 items.
- Barnaamijka baahan yahay ma aqoon farsamo ka hor.
- interface sahlay iyo fursadaha soo kabashada dhameystiran
- Wac abuse, cod mails, fariimaha, emails oo dhan waa la soo saari karaa.
1. Simple, fududahay in la isticmaalo
2. Xogta Qeybaha la yar ka kaaftoomi
3. Ka shaqeeyaa Mac iyo PC labada
1. Demo ayaa lacag la'aan ah waa mid ujeedo
2. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh screen waa mid aad u caddayn
Wondershare Ayaa Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) waa ka fog tahay mid ka mid ah ugu wanaagsan ee xal kale shawladda gurmad iPhone laga helo suuqa by. Waxay bixisaa interface aad u sahlay, oo kuu ogolaanaya in aad kaliya ma ahan Macdan hayaan ka barnaamij Lugood ee si aad u computer / iDevice, laakiin sidoo kale u ogolaataa in aad ka bogsato xogta oo la tirtiray ka iPhone.
- Easy in ay isticmaalaan oo aad u fudud in ay ku dhawaad ​​maraan
- Laba hab kabashada: Macdan gurmad Lugood iyo si toos ah uga soo kabtaan iDevices
- xogta Kulanka Xiisaha Leh hor kabashada
- Support ka website waa mid aad ka jawaabaan
1. Sidoo kale yimaado hawlo kale
2. Kabsado tirtiri karaa xogta iPhone
3. U ogolaanaya in ay si toos ah iskaan iDevice iyo kabsado xogta tirtiray
4. Miyuu interface ah mid aad u fudud
Tallaabooyinka hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7
macruufka 8 Update Dhibaatooyinka - dayactir macruufka 8 Dhibaatooyinka Update Si fudud